Creative Writing » သိစေချင်	11
Posted by Alincho on May 9, 2015 in Creative Writing, Poetry | 11 comments
.သမုဒ်ပြင် မှင်ရည်သုံးပါလည်း ညွှန်းဖွဲ့မမှီ။
.မြင်မြင်ရာ အစဉ်သာလွမ်းမိတယ် ချစ်သူ့အဝေး။
Alinsett @ Maung Thura says: ငှယ်. . .
အလွမ်းနဲ့လား. . .
အလွမ်းဓါးနဲ့ အခွဲခံထားရတဲ့ စိတ်ဟက်တက်ကွဲကြီးနဲ့ပေါ့. . .
အသံ ငံကျိကျိ ကဗျာတွေကိုလည်း ဖတ်ချင်ပါသေးကြောင်းးး
အောင် မိုးသူ says: အလွမ်းဆိုတာ ဖြူစင်ပေမယ့် စိတ်တွေအရမ်းမွန်းကြပ်ခံစားရတယ်။
Mike says: .ကဗျာရေးလည်းကောင်းသကိုး ပုလင်းငို ရ (ခွက်ဒစ်တူ naywoon ni)
Alincho says: အငှားခံစားချက်နဲ့ပါ ကိုလင်းနဲ့ ကိုအောင်မိုးသူရေ။
ဦးမိုက်က ခေတ်နောက်ကျသကိုး၊ နောက်တစ်ခေါက်များလည်း ပြန်ဝင်ကြည့်ပါဦးလို့၊ အလင်းချိုရဲ့ဘဘနီဆီ ပြန်ကြားစာလေးကို
မြစပဲရိုး says: .မြင်မြင်ရာ တော့ မလွမ်းလိုက်ပါနဲ့ ချို ကလေးရယ်။
. တော်လကြာ မဟန်တာ တွေ မြင်လိုက်လို့ ဒွတ်ခ (စီဒီ – မွသဲ) ဖြစ်နေဦးမယ်။
ရွာထဲ အရောက် နာမည် နောက်တစ်မျိုး တိုးနေပါပေါ့လား။ :-))
uncle gyi says: အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: သိစေချင် သက်သေညွှန်းပါလို့
ယစ်ရွှေရည် ဖန်ဖလား နဲ့ ဖြင့်..
မပီပလာ သည်စကားရယ်တို့က ….
လာဇမ်း… ဆီဗီလာ ပွဲ က အကြွေး နှစ်သောင်းးးးး။
kai says: တသောင်းပေးလည်းဖြစ်ပါသည်။
ခင်ဇော် says: သိစေချင်ရင် ဦးလေး ခင်ဇော် ကို ပြောပြ။
Alincho says: ချစ်လို့ပြောတယ်ပဲ မှတ်ပါတယ် အန်တီမြစပဲရိုး။
ခံစားချက်က ခေတ်စနစ်တွေကို ကျော်လွှားနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ် အန်ကယ်ဂျီး။
ကိုယောက်ျားက ပုလင်းသမားလား၊ ချစ်တီးကုလား လားဟင်င်။
lu lu says: အလွမ်းဆိုတာ
ချစ်သူ ဖန်ဆင်းသွားတဲ့ ရင်ဘတ် ထဲက
အနုပညာ . . . .